Fursadaha Xirfadaha Shaqaalaha PMP - Iskuulka ITS Tech
Fursadaha Xirfadda Shaqaalaha ee Sayniska PMP
Fursadaha Xirfadaha Kadib Markaad Sameyso Shahaadada PMP
Maxay yihiin faa'iidooyinka Shahaadada Maamulka Mashruuca?
Waxyaabaha ugu muhiimsan oo ay ku jiraan kala duwanaansho dheeraad ah ee Resume
Waxay dammaanad qaadeysaa Job
Beddel xaaladdaada shaqo raadiyaha shaqaale xirfad leh
Si kastaba ha noqotee waqtiga aad shaqo la'aanta tahay, waxaad taqaanaa muhiimadda ay leedahay marxaladda hor taagan tartamayaasha ee ku saabsan helitaanka shaqo. Nolol xirfad leh waxaa lagu soo rogaa dhibaatooyin, shakhsiyaadka bilaabaya waxay ogaan doonaan in khibradaas. Waxbarashadu waa wax saameyn ah u leh in laga adkaado jagada caadiga ah ee shaqada iyo xirfad miro leh. Xaqiiqdii waa muhiim in tayadaasi ay ku faraxsan tahay sababtoo ah waxay yihiin waxa saameyn buuxda leh ku yeelanaya diiwaan gelinta. Si aad dib ugu soo celiso dusha sare, tababarka shahaadada PMP waa ujeeddada soo socota ee lagu fulinayo ujeedooyinkaaga xirfadeed.
Shahaadada Maareynta Mashruuca waa dhamaan taageerid kasta oo loo dhan yahay oo beddeli kara xirfadaha wakiillada sare iyo xirfadlayaasha faa'iidada leh kuwaas oo raadinaya albaab furan oo ka fiican. Warbixintani waxay faa'iido u yeelaneysaa maamulayaasha mashruuca, kooxaha wadajirka ah, wada-hawlgalayaasha mashruuca, kaaliyayaasha mashruuca / injineerrada, horumarinta barnaamijyada ama qof kasta oo isku dayaya inuu noqdo maamulaha mashruuca.
Suuqa shaqada ayaa dhab ahaantii kuu beddeli doona. Laguma qancin in la ogaado shaqo qabasho oo si fiican u bixisa, ugu adag tahay in la helo musharaxyo macquul ah oo buuxiya booska, kaas oo ay raadinayaan ururada maanta. Haddii ay dhacdo in aad u baahan tahay inaad ku qorto aqoonsiga PMP wuxuu muujin doonaa qaab kale oo ah fursado.
Xirfadlaha maareynta mashruuca, waxay u muuqataa inay noqoto mid caqli-gal ah isla markaana soo saarta kalsoonida gacan-ka-qabashada. Marka ay buuxinayaan dhammaan shuruudaha si ay u fuliyaan maareynta mashruuca urur kasta laga bilaabo bilowga, dejinta, fulinta, kormeerka, xakamaynta, iyo gabagabeynta. Shahaadada oo dhan ayaa loo dhan yahay oo lagu aqoonsado tiro badan oo shirkado ah. Marka laga reebo fidinta xeeladaha shaqada, waxaa laga yaabaa inay dhisaan mushaar bixinta dadka qaarkood.
Wixii urur kasta oo HR ah, mid walbana wuxuu kufaraxsan yahay xirfadlayaasha asaasiga ah, hase yeeshee kuwa haysta tababarka shahaadada PMP ee aad muujinayso kala duwanaansho. Taasi waa waxa laga yaabo in ay hubiyaan meel bannaan. Waxay muujinaysaa in aad tahay mid ku haboon in lagu gudbiyo mashaariicda ay ka soo baxdo waxa ururku ka filayo inaad ka noqoto tababare ahaan. Xaalad kasta ha noqotee ururka waa mid qaran ama mid caalami ah, PMP waxay kuu soo bandhigi kartaa horumar aad u ballaaran oo horumar leh mustaqbalka mustaqbalka. Si loo kordhiyo qiimaha urur iyo Resumeygaaga, waxaa muhiim ah in la abuuro macluumaad iyo kulanno taasna waa sababta tababarka PMP uu yahay go'aanka saxda ah ee raadiyaha shaqo ee adduunka oo dhan.
Khabiirka takhasuska leh waa inuu ka helaa tayadaada oo kuu beddelaya kaaliye suurtagal ah oo ka mid noqon kara ururka. PMP waxay dammaanad qaadeysaa xayasiin iyo xirfad shaqo. Ururku wuxuu rabaa inuu wax ku biiriyo oo uu siiyo fursado wakiillada keenaya natiijooyinka dhabta ah.
PMP waxay sii ballaarin doontaa faa'iidadaada waxayna awood u siisay mashaariicda maareynta maareynta kobcinta kartida gaar ahaaneed ee lagu xayeysiinayo. Aragtida rasmiga ah waxay muujineysaa khibradaada iyo tayadaada goobta.
Shahaadada Maareynta Mashruuca waa cadeyn dhamaystiran oo loo dhan yahay, sidaa daraadeed waxaad kordhineysaa lacagtaada. Waxaad awood u yeelan kartaa in badan oo ka mid ah faafinta aad bedesho xaaladdaada shaqo raadiyaha si aad u hesho xirfad barasho leh. Aragtida waxaa loo qoraa horjoogayaal kooxeed, wada-hawlgalayaasha mashruuca, kaaliyayaasha mashruuca, injineerada barnaamijyada ama qof kasta oo aqoon u leh oo khibrad leh, oo isku dayaya inuu noqdo maamulaha mashruuca.